Tanzania: Jery Todika Ny Fiomanana Tamin’ny Fitsidihan’i Obama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2013 4:17 GMT
Niverina tamin'ny andavanandro i Dar es Salaam, renivohitra ara-barotr'i Tanzania, roa andro taorian'ny nandraisany ilay lehilahy tsy iadian-kevitra fa mahery eto amin'izao tontolo izao : ny Filohan'i Etazonia Barack Obama. Nanerana ireo làlana tao an-tanàna ny sarin'io lehilahy io.
Sarin'ny Filoha Barack Obama eo amin'ny tabilao fametahana doka any Dar Es Salaam. Sary avy amin'i Sandy Temu.
Naka ny iray tamin'ireo sary eny amin'ny tabilao fametrahana doka sady tahaka ny finaritra tamin'ny famangian'i Obama ity instagrammer ity :
Nilahatra teny an-dàlambe ny vahoaka mba handray ilay Filoha Afrikana-Amerikana voalohany ao amin'ny taniny, araka ny porofoin’ ity sary bitsihana manaraka ity :
@shurufu: Manamorona ny Sokoine Drive ireo Tanzaniana miandry ny fihavian'i @BarackObama any #Tanzania. #ObamainTanzania #ObamainAfrica pic.twitter.com/yXMtpDE9KO
Ampahany amin'ilay herinandro iray lava be namangian'i Obama ireo firenena Afrikana telo ny nitsidihany an'i Tanzania, famangiana ankapobeny voalohany ny tanibe nipoirany hatramin'ny naha-voafidy azy ho Filoha voalohany tamin'ny 2008. Ao ambadiky ny fahatongavany tao Tanzania, Obama dia nanonona drafitr'asa mitentina 7 lavitrisa dolara mba ho famatsiana ny fampidiran-jiro any Avaratr'i Sahara any Afrika. Io, izay no voalaza, dia ao anatin'ny fifanarahana nezahan'ny Filohan'i Etazonia nokolokoloiina, iray amin'ireo miorina amin'ny fampiasàm-bola sy ny fiaraha-miasa :
@whitehouse: “farany, ny tanjona eto ho an'i Afrika amin'izao dia ny hananganana Afrika ho an'ny Afrikana” —Obama tany Tanzania: http://at.wh.gov/mz2hT , pic.twitter.com/pnBCU7bSCQ
Noraisina tamin'ny fomba manetriketrika i Obama tamin'ny fidinany ny fiaramanidina, tahaka ity sary voapikan'i Issa Michuzi, mpaka sary -mpitoraka bilaogy ity ny endriky ny zava-niseho teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Julius Nyerere :
Ny Filoha Obama teo am-pahatongavana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Sary nomen'i Issa Michuzi.
Ny sary toy izao no nahatonga mpibitsika iray hiteny tahaka izao :
@bkyeyune: Finaritra kokoa noho ny tany Afrika Atsimo i Obama tany Tanzania, raha jerena amin'ny sary amin'ny aterineto.
Tsy teny an-dàlamben'i Dar es Salaam ihany ny fahalinana ny amin'ny fitsidihan'i Obama. Nobitsihin'i Gaure Mdee (@Profesy) ity sary avy ao amin'ny tanànan'i Stone, Zanzibar ity izay mampiseho ny vahoaka mijery ny famangiany amin'ny fahitalavitra ao an-toerana :
Zanzibaris (ilazàna ny teratany avy ao Zanzibar) mijery ny famangian'i Obama ao amin'ny fahitalavitra ao an-toerana . Sary avy amin'i@Profesy.
Na dia izany aza, tsy ny rehetra tao amin'ny firenena akory no narisika tamin'ny famangian'i Obama. Ilay lehilahy hita ato amin'ity lahatsary YouTube nalefan'i Omar A. Mohammed, Karabani, Ras Novatus ary John Mahundi eto ambany ity, izay miasa tsy lavitra ny làlana nizoran'ny fiara mitondra ny Filoha dia niteny fa fitiavan-tena no nankanesan'i Obama tany Tanzania ary tsy misy ifandraisany amin'ny fanampiana ny firenena na ny vahoakany ny fotoana laniny tany Tanzania.
Mitovy amin'ny fomba fijerin'i Elsie Eyakuze, bilaogera ao amin'ny Mikocheni Report, io fomba fijery io. Herinandro lasa izay no nampatsiahivany ny teny hoe ‘ fanjanahana amin'ny endriny vaovao’ amin'ny fitantaràna ny marina momba ny famangian'Atoa. Obama :
Misy delegasionanà mpandraharaha an-jatony mandinika izay rehetra azo atao any Tanzania manodidina an'i Obama amin'izao fotoana izao. Misy zavatra mampisalasala ny fiheveran-tena ho mahita rariny kely eo imason'i Amerika eto amin’ ity tontolo ity… ny solika, ny Africom, ny Fiaraha-miasa amin'ny Fampandrosoana ny Taonarivo, ny mpandraharaha – Inona no dikan'ireo amin'izao zavatra iainantsika izao ? Eny, ho aty Tanzania i Barack Obama. Raha toa ka mitondra fiaramanidina feno ny fanajana ny zon'ny mponina ary manindrona izany mivantana any amin'ny làlan-dràn'ny governemantako izy dia ho faly aho. Nefa fantatro fa manana olana kely amin'ny fanajana ny fahalalahan'ny Amerikana na dia izy POTUS aza -toy ny , atao hoe : fahalalahana tsy ho eo ambany fanaraha-mason'ny fanjakana ? *mampiaka-tsoroka.*
Nisy fitarainana momba ny fankalazana be atao amin'ny fahatongavan'ny Filohan'i Etazonia izay tsy mba atao amin'ireo Filoham-pirenena hafa tonga mitsidika tao amin'ny Vijana.FM :
Azoko tsara ny fiomanana lehibe ho fitandroana ny fandriampahalemana amin'ny fandraisana azy, saingy rehefa mandray vahiny ambony ihany ve isika vao tokony hanadio ? Azoko fa hamangy ny firenentsika izy ary angamba manan-javatra tsara maro entina ihany koa, fa ny fomba entintsika mandray azy no kidaladala. Inona no hafatra alefantsika ho an'ireo fanjakana afrikana namantsika , ary indrindra indrindra amin'izao tontolo izao ? Inona no hafatra ampitaintsika amin'ny taranatsika, ireo mpitarika amin'ny fanaovana izany ?
Ankoatra izay, namafisin'i January Makamba, minisitra lefitry ny Hairaha sy ny Haitao, ao amin'ny bilaogy Taifa Letu fa tsy Tanzania na Afrika no mila an'i Etazonia fa Etazonia no mila bebe kokoa an'i Afrika :
Mbola matanjaka ny fitarihan'i Etazonia izao tontolo izao – fara-faharatsiny amin'izao fotoana izao. Ny fanaovana asa soanoho ny maha-olona no fomba iray hitazonana sy hanamafisana izany manoloana ny tsy filaminana eto amin'izao tontolo izao, ny fitrandrahana ny ara-toe-karena, ny fifaninanana ara-kolontsaina. Ary izany no andrasan'ny Afrikana maro- tsy hoe manampy firenena iray noho ny resaka fiarovana na hanaovana paikady fotsiny Etazonia noho ny fampivoarana ny soatoavina- ny fahalalahana, ny fitoviana, ny fandeferana ary ny fampandrosoana ny maha-olona.
Ireo Tanzaniana sasany toa mody faly tamin'ny fitsidihan'i Obama ny fireneny, fomba fijery iray avoitran'ity lehilahy iray ao amin'ny lahatsary asehon-dry Omar A. Mohammed, Karabani, Ras Novatus ary John Mahundi ity, raha niteny rehefa nahita ny fandalovan'ny fiara mitondra ny Filohan'i Etazonia amin'ny làlany mankany amin'ny ‘Trano Fotsy’ :
Nalain'i Ahmed Salim (@asalim86) ny zavatra tsapan'ny firenena omaly hariva rehefa lasa i Obama :
@asalim86: …lasa ny POTUS [Filoham-pirenen'i Etazonia], ndao hiverina amin'ny fiainantsika andavanandro aty #Tanzania
Fa raha mbola adihevitra be ny dikan'ilay fitsidihany, dia tahaka ny efa nametraka sahady ny lova amin'ny maha-izy azy ao an-tanànan'i Dar es Salaam ingahy Obama:
@shurufu: #ObamainTanzania: Barack Obama no anaram-baovao nomena ny Barbara. Cc: @BarackObama pic.twitter.com/IuSXycqsL7
Anaram-baovao nomena ny làlana Barbara ny hoe Barack Obama. Sary avy amin'i @shurufu.